သိကောင်းစရာများ Linux မှ
ဤဆောင်းပါးသည်သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် ပို၍ ရည်စူးသည် GNU / Linux များငါတို့မကြာမီပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စီမံကိန်းအတွက်ငါ့ကိုအချိန်အကြာကြီးငါ့ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်သော Cepero စီမံကိန်း။
ကျွန်ုပ်သည် Windows အသုံးပြုသူ ၈ နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် operating system တစ်ခုစီတပ်ဆင်ပြီးတိုင်းနေ့စဉ်ငါအလုပ်လုပ်သောဖိုလ်ဒါများနှင့်ပရိုဂရမ်များအားလုံး စုစည်း၍ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါ့မျက်လုံးကိုဖမ်းစားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအရာတစ်ခု GNU / Linux များ, root အခန်းက္ကို format ချပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ (Windows တွင် disk C သည်ဖြစ်လိမ့်မည်)ကျွန်ုပ်၏ဖိုတာများသည်အတူတူပင်၊ သူတို့နှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျန်အရာအားလုံး - တူညီသောသင်္ကေတများ၊ တူညီသောညွှန်းကိန်းများ၊ တူညီသောနောက်ခံပုံများနှင့်နေ့စဉ်သုံးစွဲရန်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်များအတိုင်းပင်မေးလ်သုံးစွဲသူသို့မဟုတ်ဘရောင်ဇာတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ ကောင်းပြီအဖြေကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြန့်ဝေ၏ GNU / Linux များ, အသုံးပြုသူ settings ကို (သင်ကသင်္ကေတ link တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားလှည့်ကွက်များဖြင့်မဟုတ်ပါကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါက) ဖိုင်တွဲထဲတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည် / နေအိမ် / အသုံးပြုသူ / အသုံးပြုသူဒေတာသိုလှောင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အခန်းကန့်၊ disk D ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်တူသည်။
ဤချိန်ညှိချက်များကိုလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွဲများတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ (အမည်ရှေ့တွင်ကာလပါဝင်သည့်ဖိုလ်ဒါများ)* ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် format ချသည့်အခါလိုအပ်ချက် (၂) ခုကိုသာလိုအပ်သည်။
အခန်းကန့်ကိုပုံစံမချပါနှင့် / အိမ်။
နောက်သို့ တူညီသော username ကိုထည့်ပါ စနစ်ဒါ တူညီသော / အိမ်မှာ partition ကိုထား.
ဤနည်းအားဖြင့်၊ စတင်ချိန်နှင့်ပုံမှန်သုံးစွဲသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ log in လုပ်သောအခါအရာရာသည်၎င်း၏နေရာတွင်ရှိနေသည်။
အရေးကြီးသော: သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွဲကိုစာဝှက်ရန်စကားဝှက်တောင်းရန်ရွေးစရာကိုသင်ရွေးချယ်ပါက (ဤရွေးစရာကိုတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းသတ်မှတ်သည်) ထားရမည် တူညီသောစကားဝှက်ကို သင်၌ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးလျှင်သို့မဟုတ်ပါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပြုချက်မရပါ / နေအိမ် မသက်ဆိုင်အသုံးပြုသူတူညီသည်ရှိမရှိ၏။
2 ဒီသီအိုရီအားလုံးကိုစကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်ရှင်းပြခြင်း -
En GNU / Linux များ ကျနော်တို့ shared သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုသူ configurations ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသူများသည်ထဲမှာသိမ်းဆည်းသောသူတို့ဖြစ်ကြသည် / နေအိမ် အထက်တွင်ရှင်းပြထားသကဲ့သို့လျှို့ဝှက်ဖိုလ်ဒါအတွင်းရှိသုံးစွဲသူနှင့်မျှဝေထားသည့်ဖိုင်များသည်သိမ်းဆည်းထားသူများဖြစ်သည် (အမြစ်အဖြစ်) ဖိုင်တွဲထဲမှာ / usr / share /.
အတွင်း / usr / share / အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖိုင်တွဲနှစ်ခုရှိသည်။ icons များ y themes များ။ ပထမ၊ icon များနှင့် cursor များကိုသိမ်းပြီးဒုတိယနေရာတွင် themes များသိမ်းဆည်းထားသည် gtk y စွမ်းရည်ငါတို့နောက်မှပြောမည်။
အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတူညီတဲ့ဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးမယ် / နေအိမ် အသုံးပြုသူနှင့်ရှေ့တွင်အမှတ်ထည့်ပါ (.icons များ, .themes) ၎င်းတို့ကိုဖျောက်ရန်၊ စနစ်စတင်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာ icon pack, Gtk pack, ဒါမှမဟုတ် cursor အတွက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုရှိချင်တယ်ဆိုရင်အခြားအသုံးပြုသူများရွေးချယ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်မတူပါက၎င်းတို့ကိုဤဖိုလ်ဒါထဲသို့ထည့်ပြီး / နေအိမ်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ကွန်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ဖောင့်များကိုဖိုလ်ဒါထဲသို့ထည့်ပါ .icons များ, .themes o .fonts ကျွန်တော်တို့၏ / နေအိမ်, အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်းအတွင်း၌ထည့်သွင်းထားပါက၎င်းတို့သာကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် / usr / share, စနစ်၏အသုံးပြုသူများအားလုံးသူတို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးသော: ၄ င်းကိုအမြဲတမ်းအထူးအကြံပြုလိုတယ်၊ အထူးသဖြင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်၊ ငါတို့အတွင်းရှိအိုင်ကွန်များနှင့်အခင်းအကျင်းများကိုကူးယူပါ / နေအိမ်များသောအားဖြင့် folder ကိုကတည်းက / usr / share ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုပုံစံချသည့်အခါ၎င်းသည်ဖျက်လိုက်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် desktop environment များကဲ့သို့ Gnome o KDE ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပေးသည်၊ ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုစီတိုင်းကို desktop စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ app တစ်ခုမှတဆင့်ကူးယူသော်လည်း၎င်းသည်အခြားအလုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်များအတွက်သိသင့်သည်။ Xfceသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ window window ကိုအသုံးပြုပါက Openbox o flux box.
ငါတို့ပြန်လည် install လုပ်တိုင်းအချိန်တိုင်း၌အရာရာရှိလိမ့်မည်။
*လျှို့ဝှက်ဖိုလ်ဒါများကိုပြသရန် Gnomeဖိုင်ဖိုင်စူးစမ်းလေ့လာသူသို့သွားပြီးသော့ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည် Ctrl + h။ ဒါမှမဟုတ်မီနူးကိုသွားနိုင်ပါတယ် ကြည့်ရန်»ပြရန် / ဖျောက်ထားပါ လျှို့ဝှက်ဖိုင်များ။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် KDE နှင့် လပိုင်, သော့ပေါင်းစပ်သုံးပြီးပြုမိသည် Alt + ။ (အမှတ်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » သိကောင်းစရာများ
၎င်းသည်အရာရာတိုင်းနှင့်အတိအကျဖြစ်သည်။ / အိမ်မှ / နှင့်ခွဲထုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်တပ်ဆင်သည့်အခါအရေးကြီးသည်၊ အနည်းဆုံး / အိမ်မှသီးခြား / နေရမည်။
/ boot / usr နှင့်အခြားသူများထားသူများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ် / home နှင့် / လဲလဲကျေနပ်သည်။
လူအတော်များများသည်စိတ်ကြိုက်ပုံစံချခြင်းမလုပ်ခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကို disk တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသောကျယ်ပြန့်သောအခန်းကန့် (လူသားများအတွက်ဖြန့်ဖြူးသောအလေ့အကျင့်များ) တွင်မထားသည့်အကျင့်ဆိုးရှိသည်။
အမှန်တရားမှာပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း၌အလုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ စနစ်အားအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ထားခဲ့ရန်၊ အချို့သော configuration file များကိုဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆိုးသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း distros အချို့သည်အခန်းကန့်တစ်ခုသာပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သီးခြား / home ထားသင့်ပြီးနောက်မှတပ်ဆင်မည့် application အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ချဲ့ထွင်ရန် option တစ်ခုဖြင့် root ကိုချန်ထားသင့်သည်။ Distrons များသည်တပ်ဆင်မှုမှအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်။
distro ပြောင်းလဲသောအခါ / home တွင်ရံဖန်ရံခါခွင့်ပြုချက်အမှားအယွင်းများလေ့ရှိတတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ("chown" နှင့် "chmod") ကိုပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာသင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသင်၏အချက်အလက်များအားလုံးနဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကောင်းသောအစွန်အဖျား! ယခု disk ကို / home နှင့်ခွဲရန်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့် distros အများအပြားကိုသင်မကျင့်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုချင်းစီ၏မည်မျှကိုမတွက်မိစေရန်တွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို welcome ကြိုဆိုပါသည်
တွက်ချက်တာကပြmoreနာမရှိပါဘူး။ သင့်မှာ RAM 1GB ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်များမယ်ဆိုရင်၊
/ - 10GBs
swap or swap area - » 512MB
/ နေအိမ် - »ကြွင်းသောအရာ ... သင်ချင်သမျှ
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများနှင့်သင်မေးထားသောမေးခွန်းများ let ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ
မလွယ်ဘူး root အခန်းကန့် [/] (အဆင်ပြေစေရန်) အနေဖြင့် ၈ မှ ၁၅ Gb ကြားရှိနိုင်သည်။ RAM memory ကို 8Gb ထက်မပိုစေဘဲကျန် partition partition သည် home partition [/ home] ဖြစ်သည်။
Arch ကို install လုပ်တဲ့အခါအမြစ် (/) မှာ 20 gbs ကိုထည့်ပြီး 500mb နဲ့ home ကိုကျန်မှာထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Packets, Blender, LibreO စသည်ဖြင့်ထည့်သွင်းပါ။
ဒီကိစ္စမှာငါဘာလုပ်ရမလဲ။ pacman -Scc ကြိုးစားကြည့်ပါ
ကောင်းပြီ, သင် Pacman cache ကိုသာမက logs နှင့်အခြားကဲ့သို့သောအခြား directory များကိုစစ်ဆေးရမည်။ 20Gb နှင့်အတူအမြစ်ကိုဤနည်းအတိုင်းဖြည့်ရန်အလွန်ရှားပါးသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာစာမတတ်သူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကို Serrano ham ရဲ့ခြေထောက်နဲ့မတူတဲ့သူတွေအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုအားလုံးသည် / / from / ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်၏စုံစမ်းမှုသည်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HOME တွင် .icons နှင့် .themes ဖိုဒါများထားရှိခြင်းသည်မည်မျှအသုံးဝင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပြီးနားလည်ပါသည်။ သို့သော် ppa မှတဆင့် install လုပ်သော Faenza icon များကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်နည်း။ ppa မှ icon နှင့် themes များကိုအမြဲတမ်း / usr / share တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
Faenza, Numix, NitruxOS စသည်တို့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်မည်ကိုပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဘယ်အချိန်သူတို့ ppa ကနေတဆင့် install လုပ်သလဲ?
နည်းပညာ - ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာသုတေသနက၎င်း၏ Blackberry BBX ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။